ဂျိဘုရိကမ္ဘာရောက်သွားသလိုလို မှော်ဆန်တဲ့ဗိသုကာအဆောက်အအုံလေးများ - JAPO Japanese News
ဟူး 30 Oct 2019, 15:04 ညနေ
(My neighbour Totoro) နှင့် (Spirited Away) ဇာတ်လမ်းတွေထဲကလိုမျိုး အဆောက်အအုံဖြစ်ပါတယ်။
ချီနိုမြို့၊ နဂနို့ခရိုင်မှာရှိပြီး ဗိသုကာပညာရှင် တဲရုနိုဘု ဖုဂျိမိုရိ စံရဲ့လက်ရာ အံ့မခန်းဖွယ်ရာ ဗိသုကာလက်ရာဆန်း ဖြစ်ပါတယ်။
Castle in the sky ဆိုတဲ့ anime လေးကိုတောင် သတိရမိတယ်။ အဲဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ ဂျပန်နာမည်ကလည်း “ကောင်းကင်တွင်ပျံသန်းနေသောရွှံ့လှေ” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်ပါတယ်။
“လေထဲမှာ အဆောက်အအုံ ဆောက်ချင်တယ်”လို့ဆိုတဲ့ ဖုဂျိမိုရိစံ ရဲ့ဆန္ဒ ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီလက်ဖက်ရည်အခန်းကတော့ လုံးဝလေထဲမှာ မျောလွှင့်နေသလိုမျိုးပါပဲ။ ဘယ်ညာအရွယ်အစား၊ ပုံပန်းသွင်ပြင် အချိုးမညီတဲ့ လက်ဖက်ရည်အခန်းက ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင် ဘောလုံးငါးလိုပုံစံမျိုးနဲ့ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်နော်။
ခေါင်မိုးကို ကြေးနီအချပ်အပြားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားပြီး အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကိုတော့ ရွှံ့နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ကြေးနန်းကြိုးနဲ့ အစွန်းနှစ်ဖက်ကနေ ချိတ်ဆွဲထားတာကြောင့် လေတိုက်တဲ့အချိန်ဆို ယိမ်းထိုးပြီး လှုပ်ယမ်းနေပါသေးတယ်။
ဒါနဲ့စကားမစပ် လှေကားတွေဘာတွေ မရှိဘဲ ဘယ်လိုအထဲဝင်ရမလဲ မသိဘူးနော်??
မင်မင်သာဆိုရင် ဘေးမှာထားထားတဲ့ လှေကားကိုထောင်ပြီး တက်ကြည့်ချင်တယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ရွှံ့လှေလေးက လေတိုက်ရင် ယိမ်းထိုးပြီးလှုပ်ယမ်းနေလို့ လှေကားနဲ့တက်ရင်လည်း ကြောက်ဖို့ကောင်းမယ့်ပုံပဲနော်…..
ဆက်ပြီးတော့ ဒါလေးကိုကြည့်ပါအုန်း အမြင့်ကြီးပဲနော်…
မြေပြင်ကနေဆို ၆ မီတာအမြင့် ရှိပြီး သစ်အယ်သီးပင်ပေါ်မှာ ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ “Time” မဂ္ဂဇင်းမှာ “ကမ္ဘာမှာ အရမ်းကိုအန္တရာယ်များတဲ့အဆောက်အအုံ Top 10” အနေနဲ့ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရဖူးတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တာပါ။ ဒီဟာကတော့ လှေကားတစ်ဆက်တည်း ပါနေတယ်နော်။ ဒီမှာ နေ့လည်တစ်မှေးလောက်အိပ်ပျော်သွားမယ်ဆိုရင် အရမ်းကိုနေလို့ကောင်းမယ့်ပုံပဲနော်။
အရမ်းမြင့်လွန်းတဲ့ ဒီအဆောက်အအုံရဲ့အနောက်မှာလည်း အဆောက်အအုံအနိမ့်လေးကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အရမ်းမြင့်လွန်းတဲ့အဆောက်အအုံရဲ့အနီးအနားမှာရှိနေပြီး အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးနီးပါးက မြေကြီးထဲမှာ မြှုပ်နေတဲ့အဆောက်အအုံဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆို ဒီဟာကတော့ နိမ့်လွန်းတဲ့အဆောက်အအုံပေါ့နော်။
နိမ့်လွန်းတဲ့ ဒီအဆောက်အအုံက ၂၀၁၇ နှစ်မှာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တဲ့ အဆောက်အအုံအသစ်ဖြစ်တယ်။ တစ်ဝက်လောက်က မြေကြီးထဲမှာမြှုပ်နေပြီး တွင်းပုံစံနဲ့ နေထိုင်ဖို့အတွက်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အဆောက်အအုံ မဟုတ်ဘဲ လက်ဖက်ရည်အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ “ဂျိုမိုအနုပညာပရောဂျက် ၂၀၁၇” ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ဆောက်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်မိုးက ကြေးနီအချပ်အပြားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားပြီး အတွင်းဘက်ဒီဇိုင်းကိုတော့ အင်္ဂတေနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ မျက်နှာကြက်က နိမ့်တာကြောင့် အရပ်အမြင့် ၁၇၀စင်တီမီတာလောက်ထိ ရှိတဲ့သူပဲ အထဲမှာရပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အထဲမှာ လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့အတွက် ရေနွေးကရား၊ ရေနွေးအိုးနဲ့ မီးလင်းဖိုလည်းရှိတယ်။ မီးလင်းဖိုနှင့် ဖယောင်းတိုင်မီးမှာ အနည်းငယ်သာလင်းနေတာကြောင့် စိတ်အေးချမ်းမှုကို ဖြစ်စေပြီး အေးအေးဆေးဆေး လက်ဖက်ရည်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ဆို အထဲကိုဝင်လို့မရတဲ့ အဆောက်အအုံ ၃ ခုဖြစ်ပေမယ့်လည်း ချီနိုမြို့မှ ပြုလုပ်သော ခရီးသွားအစီအစဥ် မှာ ပါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ အတွင်းထဲကိုလည်းဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း လူကြိုက်များတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့် ၁၁ လပိုင်း အထိ ကြိုတင်ဘိုကင်များ ပြုလုပ်ထားပြီးပါပြီ။ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်စတင်မယ့် ခရီးသွားအစီအစဥ် ကတော့ လာမယ့်နှစ် ၄ လပိုင်း (၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ) မှာရှိပါလိမ့်မည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကတော့ အောက်ပါလင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုကျိုကနေ ရထားနဲ့ဆို ၂နာရီ၊ ဘတ်စ်ကားနဲ့ဆိုရင်တော့ ၃နာရီနဲ့ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ချီနိုမြို့၊ နဂနို့ခရိုင်မှာ ရှိပါတယ်။ အထဲကို မဝင်ရလည်းပဲ အပြင်ကနေကြည့်ရုံနဲ့တင် သွားရတာတန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဆက်ဆက်သွားကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ တစ်လက်စတည်းနဲ့ နဂနို့ခရိုင်မှာရှိတဲ့ နာမည်ကြီး ဆိုဘခေါက်ဆွဲကိုလည်း စားဖို့ မမေ့နဲ့နော်!!!!
မိသားစုနဲ့အတူ Deco ဖက်ထုတ်လေး လုပ်ကြည့်ကြမယ်!!!